Mpana sary Espaniola: izay no manan-danja indrindra | Famoronana an-tserasera
Encarni Arcoya | | mpanakanto
Espana dia feno mpanakanto mahafinaritra. Mpamolavola, mpanoratra ary eny, mpanao sary koa. Raha ny marina, tamin'ny taona 2019, ary araka ny trano fanontana Taschen izay nanangona ireo artista tsara indrindra 100 manerantany, dia enina amin'izy ireo dia espaniola. Noho izany, Afaka mirehareha isika fa manana mpanao sary espaniola tsara.
Ny olana dia raha tsy mila miara-miasa amin'izy ireo ianao dia tsy mifankahalala. Saingy hositraninay ihany izany manaraka satria tsy hiresaka momba ireo enina mpanazava espaniola izay noheverina ho tsara indrindra eto an-tany isika, fa anarana hafa kosa izay manomboka matanjaka be ary tsy tokony hohadinoinao.
1 Mpana sary espaniola: asa lehibe an-tsary
1.8 Mpana sary espaniola: Sara Herranz
1.10 Mpana sary espaniola: Sergi Brosa
1.11 Mpanao sary espaniola: Paqui Cazalla
Mpana sary espaniola: asa lehibe an-tsary
Ny sary, ary ny kanto hita amin'ny ankapobeny, dia mihombo hatrany hatrany. Ankehitriny ny olona dia tsy mirehareha mandany fotoana hamaky lahatsoratra, fa tsy maintsy misarika ny sain'ny mpampiasa ianao afaka 10 segondra fotsiny. Raha mahomby ianao dia fahombiazana azo antoka izany. Ka, nanjary nanjary zava-dehibe kokoa ireo mpanao sary ary nahatsikaritra izany ireo marika lehibe. Oysho, Reebok, Porsche dia anarana vitsivitsy monja amin'ireo marika iraisam-pirenena izay nampiasa sary ho an'ny sasany amin'ny fampielezan-kevitr'izy ireo, taloha na maoderina, miaraka amin'ny tanjona hahagaga.
Na izany aza, tsy mila mivoaka any ivelan'i Espana ianao raha te hahita matihanina amin'ny fanoharana, ary eto amin'ny firenentsika dia misy mpana sary espaniola izay miavaka. Ary ity misy fanamarihana kely dia kely momba ny sasany amin'ireo an-jatony amin'ireo mpanao sary manana ra Espaniôla.
Manomboka amin'ny iray amin'ireo mpana sary izay anisan'ireo mpanakanto 100 tsara indrindra eran'izao tontolo izao izahay araka ny trano fanontana Taschen (miaraka amin'i Carmen García Huertas, Dani Garretón, María Herreros, Sergio Mora ary Bruno Santín).
Mitsangana satria nahavita namorona ny fombany, tsy maka tahaka olona, ​​na dia misy fitaomana kely aza, indrindra ny lamaody (miaraka amin'ny tsipika izay hita matetika indrindra rehefa mamolavola akanjo, akanjo ary akanjo amin'ny ankapobeny eo amin'ny mpamorona).
Paula Bonet dia mahay amin'ny fampiasana ireo tsipika voasoratra izay ampiasainy hamoronana aloka.
Ny lazany dia namela azy hanao fampirantiana tsy tany Espana ihany (Madrid, Valencia, Barcelona) fa koa any amin'ny firenen-kafa sy ny tanàna toa an'i Berlin, Belzika, Paris, Porto, Londres ... Ho fanampin'izany, tsy miasa amin'ny fomba ihany no iasany. fa koa mifanaraka amin'ny sary an-tsary, sary hosodoko hosodoko, sary an-tsary ...
Inona no tena mahavariana amin'ny asanao? Ny hery ateraky ny sariny ary ny fahitana vehivavy sy tantaram-pitiavana, indraindray melanolika, ny fihetseham-po.
Anisan'ireo mpanao sary Espaniola, anarana iray izay maneno be dia be ny Elena Pancorbo. Ary izany dia satria toa manana fiainana manokana ny fanoharany. Amin'ny kapoka tsotra sy tsotra dia tsotra, ny mpikarakara dia manasongadina ny ampahany amin'ireo sary manao azy izay mijery azy ireo dia voafintina ary ireo faritra ireo ihany no amboarany, na dia manjavozavo aza ny ambiny, toa tsy maninona izany. Araka izany, mifantoka amin'ny tena zava-dehibe sy mampita izany izy.
Raha tianao ny mpanao sary Espaniola mampiasa mainty sy fotsy, izany hoe mamindra amin'ny tsy fisian'ny loko, dia azonao atao izao ny mijery ny sanganasan'i Daniel Ramos.
Ity mpampita sary ity dia mitady aingam-panahy amin'ny olona sy ny sary, izay no mahatonga ny ankamaroan'ny sangan'asany hitovy amin'ny sary tena izy. Ankoatr'izay, ary zavatra tsy fantatry ny maro, dia ny nianarana ny zavatra fantany rehetra tamin'ny fomba nampianarin-tena, izany hoe, nampiofana samirery izy ary nandinika tsikelikely ary namorona ny fombany.
Tsy dia be mpahalala i Cristina… amin'izao fotoana izao, fa izy kosa. Ary ny antony dia ireo sary namboariny dia manana zavatra tany am-boalohany izay mahasarika ny sain'ny olona. Azontsika atao ny milaza fa manana fifandraisana izy izay mampiavaka ny sanganasa rehetra, angamba satria ho hooligan, surreal na tsotra satria tsy antenainao.
foana mitady fikitikitihana zaza sy mahafatifaty, Angamba izany no mahasarika ny sain'ireo fanoharan'i Naolito, satria miteraka fahatsapana malefaka sy mafana ary ilay karazana izay mitsiky farany anao. Ary raha tsy mino an'izany ianao dia azo antoka fa ireo fanoharana omenay anao ho ohatra dia manaporofo fa marina izahay.
Iray amin'ireo sary espaniola izay nahalala manambatra ny Retro amin'ny sehatra isan'andro sy ny singa foronina. Ny valiny dia sary manaitaitra ny saina ary azo raisina ho toy ny angano hita maso ny ankamaroan'izy ireo.
Amin'ity tranga ity, ny mpanao sary miavaka satria ny asany rehetra dia mombamomba azy. Na dia misy aza ny endrik'izy ireo feno tarehy, ny marina dia ny antsasaky ny ankamaroan'ny portfolio-dry zareo.
Niara-niasa tamin'ny marika manan-danja sasantsasany izy, toa ny Fnac, Privalia ...
Mpana sary espaniola: Sara Herranz
Raketo an-tsoratra ny anaranao satria, eo amin'ireo sary an-tsary espaniola maro, iray izay manome betsaka horesahina ary izay te-hiasa maro. Ity mpanazava Tenerife ity miloka amin'ny sary mainty sy fotsy, miaraka amina loko kely amin'ny tranga sasany. Fa ny tena misongadina indrindra momba azy dia ny fanehoana ny sary nataony, na dia toa tsotra aza izy ireo, raha ny tena izy dia tsy marina.
Miaraka amin'ireo sary ireo, ny mpanoratra dia misarika ny sain'ny mpampiasa amin'ny fehezanteny izay mahatonga anao hisaintsaina.
Raha teo aloha isika dia nilaza momba an'i Paula Bonet momba ny fampisehoana lamaody, amin'ity tranga ity dia misarika an'io fomba io ihany koa Carmen García Huerta. Nahasarika ny sain'ireo marika manan-danja toa an'i Loewe, El País Semanal, Woman, Ragazza na Elle ny fanoharany.
Na dia samihafa aza ny fanoharany, ny tena mahavariana indrindra dia ny an'ny zavaboariny manokana, satria izy ireo no mahavariana indrindra ary, amin'ny tranga maro, dia miteny mihoatra ny hitanao izy ireo raha ny fahitana azy voalohany.
Mpana sary espaniola: Sergi Brosa
Raha tianao ny sary mifototra amin'ny mpanakanto mpanakanto manga, anime ary lalao video, dia ho talanjona amin'ny asan'i Sergi Brosa ianao. Raha ny marina, ireo sary manaitra izay hikarakarana ny zavatra rehetra hatramin'ny pitsopitsony kely indrindra dia miavaka.
Amin'izao fotoana izao, ny asany dia mifantoka bebe kokoa amin'ny sehatry ny lalao video, koa aza gaga ianao fa ny lalao sasany an-tranonao dia nataon'ity mpanao sary espaniola ity.
Mpanao sary espaniola: Paqui Cazalla
Ity mpanoratra ity dia manana dian-tsamihafa, ary io no izy amin'ny asany rehetra dia lava ny volo amin'ny sary ary lava toy ny tsofin'ny rivotra, manome azy bebe kokoa ny volany ary mijery azy io dia hifindra amin'ny fotoana rehetra.
Ho fanampin'izany, mahay mamorona sary azo tanterahina izy, na dia tsy manao ratsy aza ny ankizy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Mpanao sary espaniola